Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Laba Doonyood oo Dalxiis ah oo Toddobaadkan ku Wacan Ocho Rios Jamaica
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • saaciday inay • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Dalxiiska dalxiiska ee Jamaica
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, ayaa shaaca ka qaaday in laba markab oo kuwa dalxiiska ah ay toddobaadkan soo wici doonaan Dekedda Ocho Rios. Horumarkan, ayuu Wasiirku hoosta ka xarriiqay, waa caddayn dheeraad ah oo ku saabsan baahida sii kordhaysa ee loo qabo Jamaica oo ah meel loo socdo iyo guusha dadaallada dib loogu furayo qaybta dalxiiska.
MSC Meraviglia waxay ku soo noqonaysaa Dekedda Ocho Rios Talaadada, Sebtember 21, marka ugu horreysa shan wicitaan illaa Nofeembar.
Carnival Sunrise ayaa sidoo kale ku soo xirmi doonta Jamaica safarkeeda soo laabashada Arbacada, Sebtember 22.
Markii ay soo noqdeen booqashooyinka booqashooyinka joogsiga ah ilaa Juun 2020, Jamaica waxay ku aragtay koboc joogto ah warshadaha dalxiiska.
“Abaalmarinta ku guuleysatay MSC Meraviglia waxay ku laabanaysaa Dekedda Ocho Rios Talaadada, Sebtember 21, marka ugu horreysa shanta wicitaan illaa Nofeembar. In kasta oo ay leedahay awoodda qaadista qiyaastii 7,000 oo rakaab iyo shaqaale ah, waxay ku xirnaan doontaa ilaa 2,833 qof oo saaran markabka sababo la xiriira borotokoolka COVID-19, ”ayuu yiri Wasiir Bartlett.
Markabka MSC Meraviglia wuxuu ahaa markabkii ugu dambeeyay ee doonta ee ku soo xirta gudaha Jamaica horraantii 2020 markii masiibada COVID-19 ay ku dhufatay, taasoo qasabtay in la xiro xuduudaha caalamiga ah ee jasiiradda.
Doonida kale ee u shiraacanaysa Jamaica, si ay sidoo kale ugu soo xidho Ocho Rios, waa Carnival Sunrise safarkeeda soo laabashada Arbacada Sebtember 22. Carnival Sunrise wuxuu ahaa markabkii ugu horreeyay ee booqda jasiiradda iyadoo Jamaica dib loogu furay dalxiiskii dalxiiska Isniintii, Ogosto 16 waxayna wici doontaa ilaa 11 wicitaan illaa Diseembar.
"Maraakiibta maraakiibta ayaa muhiim u ah soo -kabashada waaxda dalxiiska, waxaana aragnaa soo -dhaweyn soo -dhaweyn leh oo maraakiib ah iyadoo la aqoonsanayo in Waddooyinka adkeysiga Jamaica ay siiyaan jawi ammaan ah booqdayaashayada, shaqaalaha dalxiiska iyo dadweynaha guud," ayuu yiri Wasiir Bartlett.
Soo-noqoshada booqashooyinka booqashooyinka joogsiga ah ilaa Juun 2020, waxaan aragnay koritaan joogto ah oo ku wajahan heerarkii ka horreeyay COVID-19 iyo hadda oo markabkii maraakiibta maraakiibta uu dib ugu soo noqday, waxaan sugeynaa koboc weyn oo ku dhaca tirooyinkayaga, ”ayuu raaciyay .
Mr. Bartlett wuxuu leeyahay Jamaica waxay si wanaagsan ugu diyaar garowday wicitaannada maraakiibta maaddaama dhammaan shuruudihii la diyaariyey si ay ula kulmaan borotokoollada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee Caafimaadka iyo Fayo-dhawrka COVID-19, rakaabkuna waxay ku xaddidan yihiin inay ku dhex socdaan Waddooyinka Adkeysiga leh.
"Waa inaan hoosta ka xarriiqo in maraakiibta dalxiisku ay tahay inay la kulmaan tillaabooyin adag oo xukuma dib u bilaabashada maraakiibta, oo u baahan ku dhawaad ​​95% rakaabka iyo shaqaalaha in si buuxda loo tallaalo iyo dhammaan rakaabka inay bixiyaan caddayn natiijooyin taban oo ka yimid tijaabinta COVID-19 72 saacadood oo dhoofid ah. Marka laga hadlayo rakaabka aan la tallaalin, sida carruurta, baaritaanka PCR waa waajib, dhammaan rakaabka sidoo kale waa la baaraa oo la tijaabiyaa (antigen) si loo soo galo, ”ayuu yiri Wasiir Bartlett.
Iyada oo ku saleysan jadwalka ilaa maanta, Wasiirka Bartlett wuxuu leeyahay Jamaica waxay filaysaa ilaa 20 wicitaan oo maraakiib ah kahor dhammaadka sanadka.